Izany hoe 476 efitrano fianarana no hatsangana ihany koa amin’ity taona ity. CEG valo sy lisea enina vaovao ihany koa no hatsangana amin’ity taona ity. Hotohizana ny fandraisana ho mpampianatra raikitra ireo mpampianatra FRAM. Miova tanteraka ny fijerin’ny governemanta raha ny fampianarana satria hametraka lalantsaina miainga amin’ny fanorenana sekoly fa tsy lakilasy fotsiny. Ezahina ny hahatonga ny zaza malagasy farany izay betsaka hiditra an-tsekoly amin’ny alalan’ny fampihenana ny elanelan’ny toeram-pianarana sy ny toeram-ponenana.